သစ်နက်ဆူး: October 2008
Posted by သစ်နက်ဆူး at 11:39 AM 13 comments:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 8:48 AM 18 comments:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 5:39 AM 10 comments:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 7:31 AM 15 comments:
ဒါလေးက ကိုယ်.. အနှစ်သက်ဆုံး....။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 11:11 AM 1 comment:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 10:36 AM4comments:
မူရင်းက ကိုသိန်းဇော်(မန္တလေး)ပါ....။ ကျနော်အလွမ်းဆုံး ဒေသကို အလွမ်းဖြေထားတာပေါ့....
ကျနော့်ရဲ့ karaoke လေးပါ....။
တခါတလေ ပို့ စ် အပြောင်းအလဲလေးပေါ့..။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 11:56 AM 8 comments:
...ကိုအောင်သာငယ်ရေ..အကို Tag ထားတဲ့ အချစ်ဆိုတာ လေးကို ခံစားမိသလောက် ချပြလိုက်ပါတယ်ဗျာ....
ဒါဏ်ရာပြင်းပြင်းထိခဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ အချစ်က ခါးချင်ခါးပါလိမ့်မယ်...။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 1:05 PM6comments:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 3:19 AM 17 comments:
မထင်မှတ်ခဲ့ သောစကားကိုကြားရတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိသည်....။ အားလုံးပြောဆိုပြီးမှ ခင်မက ပန်းချီဆုရမယ့်အကြောင်းပြောပြတော့ အမားကရယ်နေသည်...။ မသိမသာနဲ့ အမားကိုစိုက်ကြည့်မိတော့ အသက်၅၀ကျော်အရွယ်ဆိုပေမယ့် အပြုံးများနှင့် ကြည်လင် အေးမြလှသည်...။ဆံပင်ဖြူလေးများနှင့် ခန့် သည်..။
နောက်တော့ အမား၏ သားသမီးတွေ ရောက်လာပြီး အမားက မိတ်ဆက်ပေးသည်...။ ကိုဘာဘူ၊ ကိုဝင်းနိုင်၊ မိုးမိုး(ရွယ်တူ) ၊နှင့်
အငယ်မလေးတိုးတိုး အားလုံးက မောင်နှမ အရင်းလို ဆက်ဆံကြပါတယ်....ကိုဝင်းနိုင်ဆို တခါထဲ အိမ်ပြန်သွားပြီး သူ့ အ၀တ်အစားတွေ ယူလာပြီး ရေချိုးပြီး ဒါတွေ လဲဝတ် ရော့ယူထားတဲ့ ..။ ဂျင်း အကောင်းစားတွေ။
ခင်မကလည်း ပျော်နေသည် ။ နောက် ပြန်မယ် ...နောက်တော့ လာလည်မယ်ဟုနုတ်ဆက်သည်..၊ကိုအိတေကလည်းနုတ်ဆက်သည်...ဆိုင်ကို လာလည်ဘို့ ၊အမြဲ ၀င်ထွက်ဘို့ ခေါ်သည်...။
အဲဒီညက စတိုခန်းလေးထဲမှာ အိပ်ရတာ...ဒါတောင် အစောကြီးမအိပ်ရပါဘူး...အမားရဲ့ မောင် ကိုပေါက်က စကားပြောရအောင်ဆိုပြီး ဆိုင်မှာ လက်ဘက်သုပ်တွေ စားရင်း ညနက်သည်အထိ ပြောနေကြတာပေါ့.......။
နောက်နေ့ အိပ်ယာက ၉နာရီလောက်မှနိုးတော့ ဆိုင်ကို သွားတာပေါ့.....။ တခုတော့ရှိတယ်ဗျ...၅နှစ်လောက်လုပ်လာတဲ့စားပွဲထိုးအကိုတစ်ယောက်က ကျနော့်ကို မကြည်မလင်နဲ့ ...ကိုယ်ကနုတ်ဆက်လဲ သူစကားမပြောပါဘူး...။ ကျနော်အခြေအနေကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ သူလဲ လူဘဲလေ...။ နေရတာကလဲ သူနဲ့ တစ်ခန်းမှာ ၂ယောက်ပါ...။
ဆိုင်ကို စားပွဲထိုးစလုပ်တော့ ကိုဝင်းနိုင်နဲ့ အမားက ကြည့်ထားဦး...နားနားနေနေလုပ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က
ကျနော်က စားသောက်သူတစ်ယောက် ကမုန့် ချပေးပါဟေ့....ဆေးလိပ်ဟေ့....ပိုက်ဆံရှင်းမယ်ဟေ့....
ခေါ်သံကြားရင် ကျနော်သွားတာပေါ့....သူတို့ က ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ.....
“ ဟာ...ညီလေး မလုပ်ပါနဲ့ စားပွဲထိုး လာပါလိမ့်မယ်...နေပါ”တဲ့ ။။
ကျနော်က ကျနော်စားပွဲထိုးပါဆိုတော့.....ကောင်တာဘက်လှည့်ပြီး “ ကိုဝင်းနိုင်ညီက နောက်တတ်တယ်နော်” တဲ့ ..။
တဟစ်ယောက်လဲ မဟုတ် ၊ လာသောက်သူတွေက အပြောများလာတော့...ဦးပေါက်ကို ပြောရတာပေါ့.
ကျနော်သွားရင် သူတို့ က နေပါစေဘဲ ပြောနေတယ်ဦးပေါက်....ဘာဖြစ်လို့ လဲမေးတော့ ဦးပေါက်က ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး....
ရယ်ပါတယ်....နောက်မှ ဘယ်ခိုင်းရဲမလဲ ကွာ.....မင်းဝတ်စားထားတာလဲ ပြန်ကြည့်ပါဦးကွာတဲ့..။
အဲဒီကျမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်မိတာ...ကိုဝင်းနိုင် ဆင်ပေးထားတာလေ.......။
ရှပ်လက်ရှည်အဖြူနဲ့စတိုင်လ်ဘောင်းဘီ အနက်ရောင်နဲ့ရှုးဘိနပ် အနက်နဲ့ ....။ ခေသူမဟုတ် ဖြစ်နေတာ..။
ကိုဝင်းနိုင်ကလဲမရဘူး ၀တ်ကိုဝတ်ရမယ်တဲ့ ....။
၂ရက် ၃ရက်က ခိုင်းမယ့်လူ ခေါ်မယ့်လူကို မရှိဘူး....နောက်မှ ဆရာလေးက ( ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးတင်ရွှေပါ....ဆရာလေး လို့ ခေါ်မှ
ကြိုက်တာ...သဘောကောင်းတယ်...ကျနော့်ဆို အားကြီးစ”တယ်) ၀င်ဆုံးဖြတ်ပေးတာ....။ ၀တ်ချင်ရင် ညဘက် ကိုဝင်းနိုင်တို့ ကိုဘာဘူတို့ နဲ့အပြင်တွေ ဘာတွေ ထွက်မှဝတ်...ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလိုဝတ်တဲ့ ...။
အဲဒါနဲ့ ဘဲ ဆိုင်က အခန်းတူနေတဲ့ အကိုကြီး ပုဆိုးဟောင်းအကျီဟောင်းကို ၀ယ်ဝတ်ရပါတယ်..လူတွေများရယ်ဘို့ ကောင်းတယ်ဗျာ....အဲလိုလဲ အ၀တ်အစားလဲလိုက်ရော...ခေါ်ခိုင်းလိုက်ကြတာဗျာ...လက်တောင်မလည်ဘူး....။
( ဒါကျနော့်ဘ၀အတွက်တော့ လူတန်းစားတစ်ခုဘက်ကနေ ခံစားမှု အသစ်တစ်ခုကို မြင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ).....ကျနော်ပျော်ပါတယ်။
နောက်ပြသနာက ကျနော်က စကားတိုးတိုး ပြောတတ်တာ...။ အဲဒီတော့သူများက လ္ဘက်ရည်မှာရင် ဆရာလေး အဖျော်ခုံထိ
ပြေးပြောရတာ...အဲဒါဆို ဆရာလေးက နားကို လက်လေးကာပြီး ...“.အင်း ပြော တိုးတိုးပြော...ဘေးလူတွေ ကြားသွားမယ်...ဒါအရေးကြီးတယ်...”လို့ စပါတယ်။
နောက်တော့ ကျနော့်ကို ဘာမှမလုပ်နဲ့ ...ဟိုးဆိုင်ထောင့်ကနေ....ငါ့ အဖျော်ခုံကို မင်းပြောချင်တာ လှမ်းပြီးအော်ပြော....
ငါကကြားရင် အကြောင်းပြန်မယ်တဲ့ ..ကြည့်ပါဦး။ လူတွေရှုပ်နေချိန် ဆိုင်လူကျချိန်ဆို ထိုင်ပြီးအော်ရတယ်....
ကြာတော့ မောလာတာပေါ့....ဆရာလေး...အော်ရတာ မောပြီဆို....
ဆရာလေးက လ္ဘက်ရည်ဖျော်တိုက်ပါတယ်...။ အမားကတော့ကြည့်ပြီးရီလိုက်တာ...မျက်ရည်ပါထွက်တယ်...။
နောက်ပြသနာက လ္ဘက်ရည်မှာရင် တစ်ခွက်ပါ...ကျနော်သွားပို့ ရင် ဟိုရောက်တော့ တစ်ဝက်ဘဲ ရှိတော့တာ...လက်တွေတုန်ပြီး ဖိတ်ကျတာလေ..။
နောက်တော့ အမားက ညဘက် ဆိုင်သိမ်းပြီးရင် ကျနော့်ကို အတူနေခိုင်းပြီး လ္ဘက်ရည်ခွက်တွေမှာ ရေထည့်ပြီး စားပွဲတွေကြားမှာ လူးလားခေါက်ပြန် သွားခိုင်းပါတယ်...။ အဓိက..က ဟန်ချက်ကိုနားမလည်တာပါ..။
နော် ၃ည လောက်ကျင့်တဲ့ အခါ လက်တစ်ဖက်မှာလ္ဘက်ရည်၃ ခွက်နဲ့ ပေါင်း၆ခွက်ကို နိမ့်မြင့် ဝေ့၀ိုက်ပြီး....အမြန်သွားလာနိုင်ပါတယ်...
ဂျက်လီ ရဲ့ ထိုက်ချိမာစတာကားကို ကြည့်ရတော့ အဲဒီပုံတွေ မျက်စိထဲ ပြန်မြင်ယောင်ပြီး အမားကို သတိရတယ်....
၄ရက်မြောက်ပြီးတော့ ဆရာလေးတောင်ချီးကျူးပါတယ်...ချီးကျူးစကားကလဲ လှတယ်...
“ အေး...မင်းမှာ စားပွဲထိုးပါရမီ ပါတယ်ကွ” တဲ့.။။ ဖြစ်နိုင်တယ် သူ့ စကားက။
တော်ရုံလူ မခံနိုင်ပါဘူး....စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ ကို ဘယ်နှစ်မိုင် လမ်းလျှောက်သလဲ ဆိုတာ ၊လုပ်ဘူးမှ သိမှာ၊
ကျနော်က ပိုပင်ပန်းပါတယ်....အမားသားသမီးတွေက ညဆို ပျောက်ကုန်ပြီ...ဆရာလေးက အိပ်ပြီ..ဆိုင်သိမ်းရတာ အမား တစ်ယောက်ထဲ။ ဟိုစားပွဲထိုးကဗျာ...တစ်ကယ်ဘဲ နေနိုင်တယ်...အချိန်၁ မိနစ် ကျော်လို့ တောင် မရဘူး....ဆိုင်မှာ လူဘယ်လောက်ကျနေပါစေ...ကောက်ပြန်သွားတာ..။
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အမေအရွယ်ဖြစ်နေတော့ မနေရက်ဘူး...အမားကိုဝိုင်းလုပ်ပေးတာ...။
အမားက ညတိုင်ဆို မလိုင်ချက်တာ...အကြာကြီးဘဲ...ကျနော့်ကို လျှို့ ဝှက်နည်းတွေပါ သေချာပြောပြပြီး...မလိုင်ချက်သင်ပေးတာ
( အဲဒီ ထဲက ကျနော် မလိုင်မစားတော့တာ...ဟဲဟဲ၊ နောက်မှ ရှင်မင်းညိုကို နည်းပေးမယ်)။
မနက် ၄း၀၀ အိပ်ယာထ အလုပ်ဆင်း...၁၂နာရီနား...နေ့ ၁း၀၀နာရီကနေ အလုပ်ပြန်ဆင်း တာ ည ၁၀ ဆိုင်ပိတ် အမားနဲ့ ဆိုင်ထဲမှာ ဆိုင်သိမ်း မနက်အတွက်လုပ် ည ၂း၃၀မှာ ပြန်အိပ်...မနက် ၄း၀၀ ပြန်ထ။
နောက်ပန်းချီဆွဲရာကနေ လူသိသွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ထပ်ရလာပါတယ်...ကဗျာတွေ ရေး လက်လှည့် ဖယောင်းနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ပါတယ်....။ ကဗျာရေးဖော် အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက အားစိုက် လို့ ခေါ်ပါတယ် တရုပ်ပါဘဲ..။ တော်တော်ခင်တာ။
ပန်းချီရေး၊ ကဗျာရေးနဲ့လူလဲ ပိန်လာပါတယ်...။
ဆိုင်မှာလည်း ညနေတိုင်ဆို ကိုအောင်သာငယ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ကသာမြို့ မှာ ပထမဆုံး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ
များလာတာ...ညနေတိုင်ဆို လ္ဘက်ရည်လာသောက်ရင်း အော်တိုရေးခိုင်း၊ ကဗျာတိုရေးခိုင်းနဲ့ ။
ဆရာလေးက နားလည်ပေးပါတယ်...သူကတော့ ပြောတယ်...
“ တို့ ကသာတော့ ရာဇ၀င်ပျက်ပြီ”တဲ့ ...စ”တာပါ။
ကြားရက်လေးတွေမှာ ခင်မ လာခေါ်ပြီး သူ့ အိမ်မှာ ထမင်း ဖိတ်ကျွေးပါတယ်...
သူက တစ်ဦးတည်းသောသမီးပါ...သူ့ မိဘတွေက တော်တော်ချစ်တာ...အရမ်းလဲ အေးဆေးကြတယ်...။
အိမ်သွားလည်မှ ခင်မကို ကျနော် အံ့သြလေးစားရတော့တာ......။
ထမင်းစားပြီးတော့မှ ဧည့်ခန်းထဲ ခေါ်သွားပြီး စန္ဒယားတီးပြတာ...စုံတောမြိုင်သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ဆိုတီးတာ...။
နောက်စောင်းတီးတတ်တယ်ဗျ....။ အဲဒါ ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းခင်မ ပေါ့...။
သူကိုယ်တိုင်အနုပညာသမားမို့ ကျနော့်ကို ကူညီပေးခဲ့ တာပါ...ဆုခွဲတာကတော့ လူငယ်ကိုး....။
နောက် ညီငယ်လေးတစ်ယောက် ကျနော့်ဆီမှာ ပန်းချီ လေ့လာ သင်ယူဘူးပါတယ်...ကျနော်ကတော့ ညီအကို သဘောနဲ့ ဘဲ လိုအပ်တာ သင်ပြပေးခဲ့ တာပါ....ဆရာ သဘောမဟုတ်ပါဘူး...သူက ကာတွန်းရေးတဲ့ညိုကိုနိုင်( ကသာ) ပါဘဲ..။
အဲဒီဘ၀လေးမှာဘဲ ပျော်နေရာကနေ အိမ်က သတင်းကြားပြီး အတင်းလာခေါ်တော့...သူငယ်ချင်းတွေ ငိုတယ်...
အမားဆို ငိုလိုက်တာ...မင်းငါ့ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်အောင်လာလုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောပြောငိုတာ...ကျနော်လဲ ငိုတာပါဘဲ...။
ကျန်တဲ့ ကိုဝင်းနိုင်တို့ ဆို ပြန်မယ့်နေ့ က ရှောင်နေကြတာ...။မောင်နမတွေ အားလုံးပါဘဲ...။
ဦးပေါက်က “ မင်း နောက်တစ်ခါ သံယောဇဉ်တွယ်အောင် လာမလုပ်ပါနဲ့ တော့ကွာ...သွားတော့”တဲ့ ..။
ကျနော် ရင်ထဲမှာလဲ ငိုနေပါတယ် ...အပြင်မှာလဲ ငိုနေပါတယ်ဗျာ...။
ရှင်ကြီးဝမ်းမှာ ခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါတယ်...
အခု သူတို့ က ကျနော့် ဘ၀အမှန်ကို ဘာမှ မသိဘဲ ရှင်ငယ်ဝမ်းမှာ ၀င်စားခဲ့ တဲ့စားပွဲထိုးလေးကို ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော် ပိုပြီး ခင်တွယ်မိပါတယ်....။
ကျနော်ခင်တဲ့ ...ဖုန်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အိမ်ပြေးလေးရဲ့ ပထမဆုံးသူငယ်ချင်းကတော့၊ သတင်းကြားပေမယ့် လုံးဝ လာမတွေ့ တော့ပါဘူး....။
ကသာမြို့ ထွက်တဲ့ အထိ စက်ဘီးလေးနဲ့ များ ရောက်လာမလားလို့ မျှော်မိခဲ့ ပေမယ်......
ခင်မ ရောက်မလာခဲ့ ပါဘူး.......
ခင်မရယ် ငါက နင်ခင်တဲ့ စားပွဲထိုးလေးပါ.....ငါ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို နင်ဘာလို့ ကြည့်ခဲ့ တာလဲ...
နင့်ရဲ့ စားပွဲထိုးလေးကိုဘဲ နင်ခင်ပါဟာ....။
ခင်မတို့ ရေ...ငါဘယ် ဘ၀ရောက်ရောက် ၊ ဘ၀ အခြေ ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် နင့်နာမည်ကို တွေးမိတာနဲ့ ငါက စားပွဲထိုးလေးပါ...
နင့်ကို တွေ့ ချင်တယ် ခင်မရယ်.......။
ငါကော်ဖီ နေ့ တိုင်းသောက်ပါတယ်....မသေခင်ထိ သောက်မှာပါ...
အဲဒီ ကော်ဖီထဲမှာ နင်ရှိတယ် ခင်မရေ....။
သူငယ်ချင်း ခင်မ၊ ကိုအိတေ၊ အားစိုက်၊ ညိုကိုနိုင်နှင့် စတားလိုက်မိသားစုကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့်။
( ပို့ စ်ထဲမှာပါသော အမည်များမှာ နာမည်ရင်း အတိုင်းအမှန်ဖြစ်ပါတယ်)...။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 10:50 AM 11 comments:
ဆရာမခေါ်လာသော ကျောင်းအုပ်ကြီးအခန်းထဲဝင်လာသောအခါ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဘေးကိုရှဲကုန်သည်။
ဧည့်သည်တစ်ယောက်ပါ ဒီမြို့ ကို ရောက်လာရင်းပန်းချီပြိုင်ပွဲတွေ့ လို့ ဝင်ပြိုင်တာပါလို့ ပြောတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ သူ့ တပည့်တွေရဲ့ ပုံကို လိုက်ကြည့်နေသည်.။ ပြီးမှ တစ်ခေါက်လာပြီး ......
“ မင်းဘယ်မှာ နေတာလဲ”
“ ဒီကသာမှာပြောတာလား ဆရာကြီး”
“ ဟ...ကသာရောက်နေမှတော့ ကသာမှာနေတာကို ပြောတာပေါ့ကွာ”
“ ကျနော် ဘယ်မှာနေရမလဲဆိုတာ ကျနော်လဲမသိပါဘူး...ကျနော်အလုပ်တစ်ခု ရှာ၇မှာပါ”
ကိုယ်က ပြန်သာ ဖြေနေရတာ စိတ်ထဲမှာတော့ နဲနဲလန့် နေသည်....။
ဆရာကြီးက အခန်းရှိလူများကို ဝေ့ကြည့်ပြီး ကျနော့်ဘက်ကိုလှည့်ကာ အသံမာမာ၊ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောသည်..
“ မင်းဘာသာ ဘယ်မှာဘဲနေနေကွာ...နောက်၃ရက်ကြာရင်ဆုပေးပွဲရှိတယ်...မင်းဘဲ ပထမဆုကိုလာယူ ကြားလား”
ဆရာကြီး ဘာများပြောမလဲအထင်ဖြင့် နားစွင့်နေသူအားလုံး တစ်ချက်တော့ကြောင်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတာ....
နောက်မှ ဆရာကြီးက ကျနော့်ပုခုံးကိုကိုင်ကာ......“ မင်းတော်တယ်ကွ” ဟုပြောပြီးထွက်သွားတော့သည်...။
စိတ်မှာ အရမ်းဝမ်းသာသွားသည်...။ဒါပေမယ့် ဒါပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းအရ မဖြစ်သင့်ပါ၊ ဆရာကြီးကဆုကိုတစ်ကယ်ပေးချင်ပါစေဦး ကျန်သောရေးဆွဲသူတွေကိုငဲ့ရပါမည်။ အားနာစိတ်ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ကျနော် မကြည့်ရဲပါ......။
ဆရာကြီးကို လန့် သည့် အရှိန်နဲ့ ဘေးမှာ ကွယ်ရပ်နေသော ခင်မ ကပြေးလာပြီး လက်မောင်းကို အားရပါးရရိုက်ကာ...
“ နင် တစ်ကယ် ပထမဆု ချိတ်သွားပြီ...တို့ ဆရာကြီးတစ်ကယ်ပြောတာဟ...ဆရာကြီးကအဲလိုကြီး”
သူမပြောတဲ့ ဆရာကြီးကအဲလိုကြီးဆိုတာ ...နားမလည်ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲခန်းထဲက၂ယောက်အတူ ထွက်လာခဲ့သည်...
ကျောင်းသူလေးတွေ ရောက်လာပြီး အတင်းအော်တိုရေးခိုင်းသည်...ခင်မင်ဘို့ လဲ ကောင်းပါသည်...။
နောက်သူတို့ စကားသံဝဲ၀ဲလေးတွေကို ချစ်သည်....အထက်ပိုင်းကလူတွေ စကားဝဲကြပေမယ့် ကသာစကားဝဲပုံက တစ်မျိုးထူးခြားသည်။
သူငယ်ချင်းခင်မကတော်တော်ခင်ဘို့ ကောင်းပါသည်။သူ့ ပုံစံက ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးနှင့် ၊သွားလေးက ခေါယောင်ယောင်...ဒါပေမယ့်သိပ်မသိသာပါ..အဲ မျက်လုံက မို့ ပြီး နဲနဲပြူးတယ်...( စိတ်မဆိုးနဲ့ ခင်မရေ...ဒါမှနင့်ကိုပုံဖမ်းမိကြမှာ)။ ဒါတွေက အရေးမကြီး
သူ့ စိတ်ဓါတ်လှသည်....ကျနော်လိုချင်တာ စိတ်အလှ။နောက်ခင်မက ၉တန်းကျောင်းသူ။ ကျနော်က ၈တန်းကျောင်းသား...ရွယ်တူလြ ဖြစ်နေတော့ စကားပြောရတာ ပိုအဆင်ပြေသည်...ခဏလေးအတွင်းမှာ အရမ်းခင်သွားကြသည်..။
နောက်သတိရပြီး....“ခငမ ဟို အကိုကြီးရော ဘယ်မှာလဲဟ”
“ ငါပုံဆွဲနေတုန်း ပြတင်းပေါက်ကနေ ပြောပေးနေတာလေ...နင်မကြားဘူးလား”
“ ဟင့်အမ်း...ငါမကြားပါဘူး...ဘာပြောလို့ လဲ”
“ ငါလိုအပ်တာလေးတွေကို သူကပြောပေးတယ်ဟ...သူ့ ကို ကျေးဇူးစကားပြောရမယ်”
“ ဟာ...အဲဒီလူကြီးက ရူးနေတာဟ...နောက်သူပန်းချီမဆွဲတတ်ပါဘူး”
“ ဟမ်..ရူးနေတာ...မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။သူဆွဲတတ်တယ်...သူပြောတာ အမှန်တွေပါ..ငါဘဲသိတယ်...”
“ ညီညီ..ငါက ကသာသူနော်..ဒီမြို့ မှာ မွေး၊ ဒီမြို့ မှာနေတာ...နင်က ဒီနေ့ မှ ကသာရောက်တာ၊ နင်ကဘာမှ မသိပါဘူး၊ အဲဒီလူကြီးက
ကျနော်အံ့သြမိသည်..စိတ်ထဲမှာ အရူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရ...ဒါပေမယ့် နောက်မှ စုံစမ်းတော့မယ်လေ...တွေ့ ကြဦးမှာပါဟု
တွေးကာ ခင်မကို ဘာမှ မပြောတော့ပါ။( တစ်ကယ်ဘဲ ကသာမှာ ၅လလောက်နေပြီး ရှာသော်လည်း မတွေ့ ခဲ့ ရပါ)
အပြင်ရောက်လာပြီးမှ ခင်မကို အလုပ်ရှာပေးနိုင်မလားမေးကြည့်ရသည်။
“ ညီညီ နင့်ကြည့်ရတာ အလုပ်ကြမ်းလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး”
“ အေး....မွေးကတည်းက တစ်ခါမှတော့ မလုပ်ဘူးသေးပါဘူး....ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာပေါ့ဟာ”
“ နင်က ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်ချင်တာလဲ”
“ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငါလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးတွေ ဘာတွေ လုပ်ချင်တယ်၊ ခင်မ ...ငါတနေ့ ကို လက်ဘက်ရည် ၆ခွက်လောက်သောက်မှ နေလို့ ရတာ...”
“ အေး...ဒါဆို အတော်ဘဲ ငါ့အသိတစ်ယောက်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်ဟ...တို့ သွားရအောင်”
နှစ်ယောက်သား စက်ဘီးလေးတွန်းကာလမ်းလျှောက်ရင်း သူပြောတဲ့ ဆိုင်ကိုရောက်လာသည်...ဆိုင်ကတရုပ်ဆိုင်။ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကို ခင်မကနုတ်ဆက်ပြီး “ အိတေ” ရှိလားဟုမေးသည်...။အဘိုးကြီးခေါ်လိုက်ပြီး ခဏနေတော့
အိတေဆိုသူ ထွက်လာပြီး ခင်မနှင့် နုတ်ဆက်ပြောဆိုနေကြသည်။ လူက တရုပ်လဲဖြစ်သောကြောင့် ဖြူနုနေသည်..
ခင်မက အလုပ်လိုက်ရှာနေကြောင်း ပြောပြီး ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတော့.....
“ ဟယ်...စားပွဲထိုးလုပ်မယ်..တစ်ကယ် ၊ ချောလိုက်တာဟယ်..ခင်မ ငါသူ့ ကို ခေါ်ထားလိုက်မယ်...တစ်သက်လုံးနေလဲရတယ်”
သွားပြီ၊ ကိုအိတေက မိန်းကလေးစိတ်ဝင်နေတာ....
ကိုအိတေ မတွေ့ အောင် စားပွဲအောက်ကနေခင်မကို ဆွဲဆိတ်တော့လဲ....မုန့် တွေကို အသေအလဲတွယ်နေရင်းက....
မျက်လုံးပြူးကြီးဖြင့် ဘာလဲဟူသော အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပြန်ကြည့်နေသည်...
ပြီးမှ ဘယ်လိုတွေးသလဲတော့မသိ ကောက်ခါငင်ကာဖြင့် ထမေးသည်။။
ဟိုက ပြုံးလျှက် .....“ ၁၅၀၀”
“ ဟာ...တစ်ကယ်။။ညီညီ နင်တော့ပွပြီ၊ အများကြီးဘဲ”
ကျနော်တော်တော် တိုသွားပြီး ခင်မခြေထောက်ကို ဆောင့်နင်းလိုက်ပြီး....မျက်စောင်းထိုးကြည့်သည်။။။အမယ် မယ်မင်းကြီးမက
ကိုယ့်ကိုတောင် ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြီး ပြုံးပြနေသေးသည်...။မျက်လုံးပြူးကြီးနှင့်။
“ဒီမှာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်...”
“ ဟယ်......ဘာဖြစ်လို့ လဲ”
“ ကျနော်က မွတ်ဆလင်ပါ....ဒီမှာ ထမင်းစားရင် ကျနော် အပြစ်ရှိတယ်”
“ အို....အိုးခွဲပြီး ၂ယောက်စာ ချက်စားမယ်လေ”
ပြောနေတုန်း လက်ဘက်ရည် သောက်သူလာသဖြင့် ကိုအိတေ ထွက်သွားမှ...
“ ခင်မ ...ငါဒီမှာ မလုပ်ချင်ဘူး...သူက မိန်းကလေးစိတ်ပေါက်နေတာ...ငါ့ကို တစ်ခြားသွားပို့ ပါဟာ”
နောက်မှ အတွေးတစ်ခုရပြီး...တခြားမွတ်ဆလင်ဆိုင်တစ်ခု ငါတွေ့ ခဲ့ တယ်....နေ့ ခင်းကတောင် ..ငါသောက်ခဲ့ သေးတယ်...”
“ အော်...အေး..စတားလိုက်...နေဦး အိတေကို ငါပြောကြည့်မယ်”
ခဏနေ ကိုအိတေ ပြန်ရောက်လာတော့ ခင်မက ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး....ဒီမှာ ခက်ခနြိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်....။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုအိတေ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြောပေးပါသည်...။
သူတို့ တွေက စီးပွားချင်းတူပေမယ့် ခင်ခင်မင်မင်ပါ..။
ကိုအိတေက ဘာမှလဲ မသိဘဲ အရမ်းကို ကျနော့်ဘက်က အာမခံနေသည်....။
ဆိုင်ရှင် အဘိုးကြီးအိပ်နေသည်...စားပွဲထိုးကလဲ ရှိပြီးနေသည်ဟုပြောသည်...ကျနော်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါ။
ကိုအိတေဆီ သွားရဘို့ သာ ရှိတော့သည်။
အားလုံဆုံးဖြတ်ရခက်နေစဉ်မှာပင် ပိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီးဈေးဝယ်ရာမှပြန်ရောက်လာသည်။
အကျိုးအကြောင်းကို ခင်မနှင့် ကိုအိတေက ပြောပြတော့ ဆိုင်ရှင် အမား( အမေ....နာမည်မေ့ နေသည်)က...
“ ဒီမှာ စအလုပ်လုပ်သူတိုင်းကို ၇၀ ကျပ်ပေးတယ်...ထမင်းညမနက်ကျွေးတယ်၊ အိပ်စရာနေရာပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းကို
ငါစအလုပ်လုပ်တာနဲ့ တစ်လ ၁၀၀ ပေးမယ်...ငါ့ကိုတော့ မင်းနာမည် မခေါ်ရဘူး အမား( အမေ) လို့ ခေါ်၇မယ်”
နောက်ဆုံးပိုင်း ဆက်ပါမယ်....အားပေးသူတွေကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:03 AM6comments:
တောရိပ်တောင်ရိပ်တို့ ၏ စိမ့်စိမ့်နွေးနွေး ရစ်သိုင်းလွှမ်းခြုံမှုကို ခံစားရင်းလျှောက်လာခဲ့ တာ ဘယ်လောက်ဝေးဝေးရောက်ခဲ့ ပြီ
ဆိုတာ အတိအကျမသိပေမယ့် တော်တော်ဝေးဝေး ရောက်လာတာတော့ ပင်ပန်းလာမှုကြောင့်သိသည်....။
နေရောင်က တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသလို ပူလောင်မှုကို လူကသိပ်မခံနိုင်။ တခါမှလဲ ဒီလောက်လမ်းမလျှောက်ဘူး၊
နားလိုက်သွားလိုက် ၊စားလိုက်ရေသောက်လိုက်နှင့် လွပ်လပ်မှုကိုလဲ ခံစားရသည်...။
အခုမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆရာမင်းလူရဲ့ဌက်ကလေး လိုစိတ်ထဲထင်လာသည်...။နောက် ကချင်အဖွဲ့ တွေနဲ့ တွေ့ မလားတွေးမိသေး၊
တွေ့ လဲ ကိစ္စမရှိ လိုက်သွားမှာ...တစ်ကောင်ထဲဘဲ..၊။ သခင်သန်းထွန်းပ+ဒု စာအုပ်ကိုဖတ်ထားတာဆိုတော့လဲ ဘာမှကို မကြောက်
တစ်ကယ်တန်းတော့ မတွေ့ ခဲ့ ပါ.........။
နောက်တော်တော်ဝေးဝေးမှ ကားသံကြားရပြီး ဘယ်လိုကားလဲဆိုတာ လမ်းလျှောက်ရင်းစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့
ကားအ၀ါရောင်ကြီးတစ်စီး တွေ့ ရပြီး အနားရောက်တော့ ကားရပ်ပြီး ကျနော့်ကို မေးလာသည်။
“ကျနော် ကားမမှီလိုက်လို့ ပါ”
“ မင်းကွာ....ဒီလမ်းကို ဘာထင်လို့ လဲ...မသေကောင်းမပျောက်ကောင်း...တက်..တက်၊ကားပေါ်ကို”
“ကျနော့်မှာ ပိုက်ဆံ ၅ကျပ်တောင်မပြည့်ဘူး...ဦး”
“ မလိုပါဘူးကွာ....လာတက်...ဒါပေမယ့် နောက်မှာဘဲ ထိုင်နော်...သေချာလည်းကိုင်ထားဦး”
သဘောကောင်းသော ကားဆရာကို ဟုတ်ကဲ့ပါ...ဦး ဟုပြောရင်း ကားပေါ်ကို မနည်းတွယ်တက်ရသည်၊ တစ်ကယ်တော့
လမ်းကြုံတင်သောကားက လူစီးကားမဟုတ်၊ သစ်တင်တဲ့ ကားကြီး၊။
နောက်မှာအပြည့် တင်လာသော သစ်လုံးကြီးတွေပေါ်မှာ ထိုင်ရသည်...လက်ကတော့ သံကြိုးကြီးတွေကို မြဲမြဲကိုင်ထားရတာပေါ့...။
ကားပေါ်တက်ပြီးတာနဲ့ကားဆရာလည်း တရကြမ်းမောင်းသည်...။
ကားဆောင့်ပေမယ့် လမ်းလျှောက်တာထက်ခရီး ပိုရောက်တာမို့ အဆင်ပြေပါတယ်...။
လမ်းလျှောက်တုန်းက ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် မြေလမ်းဖုန်လမ်းမှာ မောင်းတာမို့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဖုန်တွေနဲ့ မျောက်ဖြူတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေပြီ..။ကိုယ့်ဘာသာ သဘောကျပြီး ရယ်နေမိသည်...ကားကလည်း ဆောင့်လိုက်သည်မှာ
ဒီလိုနဲ့ ပင် ကားက သစ်လုပ်ငန်းဝင်းကြီးထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ ပြီ။ ကိုယ်ကလဲ ဆင်းရမှာလား...ဆက်ထိုင်နေရမှာလား မသိ။
ခဏနေမှ ကားဆရာက “ ရပြီ ...ကောင်လေး..ငါက ဒီမှာဘဲ လမ်းဆုံးပြီ...မြို့ ထဲတော့ လိုက်မပို့ တော့ဘူး..မင်းဒီလမ်းကြီး အတိုင်းသာဆက်လျှောက်သွားတော့” ဟုပြောလာသည်၊
ကားဆရာကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ကားပေါ်ကဆင်းကာ တစ်ခါမှ မတွေ့ ဘူးသော လုပ်ငန်းများကို ငေးကြည့်နေမိသည်...။
သူတို့ တွေ ပင်ပန်းလိုက်တာ...လူတွေကလည်း ဆင်တွေနဲ့ အပြိုင် အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
ဆင်တွေ၊ သစ်တင် သစ်ဆွဲတဲ့ ကားတွေကို သေချာထိုင်ကြည့်နေခဲ့ သည်..တော်တော်လေးကြာမှ မြို့ ထဲဘက်ကိုဆက်ထွက်လာခဲ့ သည်.။
မြို့ အ၀င်က စလို့ အိမ်ကလေးတွေ ကြိုကြားတွေ့ ၇သည်...တောရွာလေးတစ်ခုလိုပင်...နောက်မှ မြင်ကွင်းတွေက မြို့ အိမ်တွေလို
ကသာကိုသာ စိတ်ထင်တိုင်းလာခဲ့ တာ တစ်ကယ်တော့ ဘယ်သွားလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ..။
စိတ်ကအားငယ်မိသော်လဲ ဘ၀တော့စပြီကွာဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းရင်း မြို့ ထဲ လမ်းလေးခွ ရောက်လာသည်...။
“စတားလိုက် ကဖီးနှင့် အအေး” ဆိုင်ကိုတွေ့ တော့ လက်ဘက်ရည် သောက်ချင်လာပြီ..။ အစ္စလာမ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။
မုန့် နှင့်လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်မှာသောက်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းလိုက်တော့ ၂ကျပ်နီးပါးဘဲ ကျန်တော့သည်..။
ပြီးမှ ဆိုင်ကထွက်လာပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်း ကြော်ငြာဘုတ်သေးသေးတစ်ခုတွေ့ ရသည်...
စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းသာလိုက်တာ ၊ နေရာကို ဖတ်ကြည့်တော့ ကသာမြို့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ..။
နီးရာလူကို လမ်းမေးပြီး ပြိုင်ပွဲရှိရာကျောင်းကို ရောက်လာခဲ့ သည်....အသေးစိတ်ပြိုင်ပွဲကြော်ငြာနှင့် စည်းကမ်းချက်ကို ဖတ်လိုက်တော့
ကသာမြို့ ၏ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊သစ်လုပ်ငန်း ၊ဒါတွေကိုခြုံငုံပြီး စက်အမှုလက်မှုကို ဖော်ကျူး
တစ်ဦးလျှင်ဝင်ကြေး ၅ကျပ်ပေးသွင်းရမည်တဲ့ ။
လူလည်းစိတ်ဓါတ်ကျသွားသည်....ပေးမည့် ဆုတွေကမနည်းပေမယ့် ၊၀င်ကြေးပေးစရာ ငွေ မပြည့်...။
နောက်တော့လဲ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဟု တွေးရင်းစိတ်ကို လျှော့ကာ ပန်းချီပြိုင်ပွဲ အခန်းကို အပြင်ကသာ ငေးနေမိတော့သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်လူတွေက ကိုယ့်လိုငယ်သူ သိပ်မပါ..လူလတ်တန်းတွေ၊ ပန်းချီစတဲန်းခုံတွေ၊ဘုဒ်ပြားတွေ စုတ်တံတွေနှင့်....။
ကြည့်နေရင်းကပင် ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဝင်လာပြီး သြ၀ါဒစကား အားပေးစကားပြောကာ ပြိုင်ပွဲကိုစတော့သည်....။
ထိုဆရာကြီးက ပန်းချီဆရာ၊ ၀င်ပြိုင်နေကြတာတွေအားလုံးက သူ့ တပည့်တွေ၊။
ခဏနေတော့ ဖုန်အလူးလူးနှင့် ကျနော့်ဘေးမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကပ်သီးကပ်သတ်အတူလာရပ်ကြည့်သည်....။
သူလဲ သူများတွေ ဆွဲနေတာကို လာငေးတာဘဲဖြစ်သည်.....။ခဏနေတော့ သူ့ ဘာသာငြီးသလို ကိုယ့်ကိုပြောသလိုနှင့်....
“ ဆွဲချင်လိုက်တာ...” ဟုပြောသည်...ကိုယ်ကလဲ အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ...
“ အင်...ဆွဲတတ်ရင် သွားဆွဲလေ”
သူမက မယုံသလိုကြည့်ပြီး....“၅ကျပ်တောင် မရှိဘူးလားဟာ..”
“ ငါအိမ်ကထွက်လာတာ...( .......)မြို့ က”
“တစ်ကယ်” “ဒါဆို ...ခဏလာဦးဟာ” ဟုပြောပြီး လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်သွားကာ ကြော်ငြာဘုဒ်ကို သေချာပြန်ဖတ်နေသည်...။
နောက်မှသူမက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသည်....။
“ ပထမရရင်ပေးမယ့်ဆုတွေ မနည်းဘူးဟ”
ကျနော်သူမရဲ့ ပွင့်လင်းမှု ကိုတော်တော်သဘောကျသည်....သူမက ဈေးတွက်တွက်နေတာကိုး။
“ဆုမရခဲ့ ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
ကျနော်သူမကိုသဘောကျပြီး ရယ်နေတော့.....ဘာလဲ နင်ကမဆွဲဘူလား.....
ပန်းချီခန်းစောင့်နေသော ဆရာမကို သွားပြောတော့ အချိန်နောက်ကျနေပြီဟုပြောသည်....။
ရပါတယ်ဟု ပြောတော့ လက်ခံပြီး ၃ပေ ၂ပေခွဲလောက်စက္ကူအထူတစ်ချပ်နှင့် စုတ်တံသေးသေးလေး၃ချောင်း၊ ပြီးတော့ စက္ကူပေါ်မှာ ဆေးရောင်လေးရောင်ပုံပေးသည်...။
ခင်မက သူများတွေလို ဆေးများများဘူးတွေနှင့်စုတ်များများပေးဘို့ ပြောတော့ ဒါဘဲရမယ်ဟုဆရာမကပြောသည်...။
စိတ်ထဲမှာတင်းကနဲ ဖြစ်သွားတာ..။ မညီမမျှလုပ်သလိုခံစားမိပေမယ့် လိုရင်နည်းနည်းတောင်းလို့ ရမလားမေးတော့
သူများတွေလို စတဲန်းခုံနဲ့ အောက်ခံဘုတ်ပြားတောင်းတော့ မရှိဘူး....ဆွဲ၇င်ကြမ်းပြင်မှာဆွဲလဲရတာဘဲ...တဲ့ ။
သြော်...လောကကြီးကဘာလို့ များမညီမမျှတွေ လုပ်နေဖြစ်နေကြတာလဲ..
“ ရတယ်ခင်မ မပြောနဲ့ တော့ ၊ ကြမ်းပြင်မှာလည်း ငါဆွဲလို့ ရပါတယ်”
“ သူတို့ ကိုနိုင်အောင်ဆွဲသိလား...သူတို့ တပည့်တွေမို့ ဘက်လိုက်နေတာ...ငါသိတယ်...”
“ မပြောနေနဲ့ တော့ ကဲ..ငါစတော့မယ်”
ပြောပြောဆိုဆို အလင်းရောင်ရသော တံခါးပေါက်ဘေးမှာ နေရာချလိုက်သည်...ပြိုင်ပွဲဝင်နေသူတွေက ဖုန်အလူလူးနှင့် ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ဆွဲဘို့ လုပ်နေသောကျနော့်ကို လှောင်ပြုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေကြသည်....တစ်ချို့ က မကြားတကြားရယ်နေသည်...။
ကိုယ့်နယ်မှာကြက်ဖ၊သူများနယ်မှာကြက်မ ဆိုတော့လဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့....။
ဆွဲမလိုလုပ်ပြီးမှ သူတို့ ဆွဲတာကို လိုက်ကြည့်လိုက်သည်...။
ဒီလောက်ကြာတာတောင်တစ်ချို့ က အောက်လိုင်းကောက်လို့ မပြီးသေး။ တစ်ချို့ က အရောင်စသွင်းနေပြီ...။
အားလုံးကို လိုက်ကြည့်ပြီးသောအခါ စိတ်ကသိလိုက်ပြီ.....။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးလို့ မဟုတ်ပေမယ့် သေသေချာချာကိုသိနေပြီ။
ဒါနဲ့ နေရာပြန်ယူ.....လုပ်ငန်းပုံတွေပြန်စဉ်းစား။ ပြီးတော့ ကားဆရာကြီးကို စိတ်ထဲက အထပ်ထပ်ကျေးဇူးစကားပြောမိသည်။
ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းတေါက မခက်ပေမယ့်...သစ်လုပ်ငန်းကို လိမ်လို့ မရ...ဆင်၊ သစ်တင်ဝန်ချီကား...ဒါတွေကအရေးကြီးသည်...နာရီပိုင်းလေးလောက်ကမှ သစ်တောဝိုင်းထဲမှာ ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ သောကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာ အားလုံးအလွတ်ရနေသည်...။
လုပ်ငန်းတွေကို ရောစပ်ပြီး အောက်လိုင်းကောက်သည်...။
တံခါးပေါက်အပြင်မှ လာကြည့်နေကြသော ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ချို့ က ဖုန်တွေသဲတွေနှင့် ကျနော့်ကို လာရီနေသေးသည်...။
နောက်အရောင်တွေစသွင်းပြီးစိတ်ကိုနှစ်ဆွဲနေတုန်းမှာ တံခါးပေါက်တွင် လူတစ်ယောက်လာရပ်ကြည့်တော့...ကျောင်းသူတွေ လစ်ကုန်ကြသည်....။ ထိုလူက ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးဗရပွနှင့်...ဆံပင်တွေကကောက်ဖွာပြီး အရှည်ကြီး။
ပါးစပ်ကို လက်နှင်ကွယ်ထားပြီး ပြောနေတာ ထိုသူပင်။ သူပြောတာမှန်ပါသည်...ကိုယ်လည်းလျှော့ချသည်..သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်စွာပြုံး
ခဏနေပြီး...တချို့ နေရာလေးတွေရောက်လျှင် အဲဒါလေး ၀ပ်ရှ် လုပ်( ရေမျှော) လိုက်...။ တုန်းမြှင့်လိုက်။ စသဖြင့်လိုအပ်တာလေးကိုတိုး
သူထောက်ပြတာလေးတွေက ပန်းချီကားကို ပိုပြီး အသက်ဝင် သဘာဝကျစေတာ အမှန်ပင်..နောက် “ ရနေပြီ...လက်စသပ်တော့”
သူထွက်သွားမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပြတင်းပေါက်ကနေမရော အထဲထိဝင်လာပြီး ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြသည်....။
အလင်းရောင်ပင် မရချင်တော့။ နောက်သူတို့ စာအုပ်ထဲမှာ အော်တိုရေးခိုင်းကြသည်....ကျနော်အံ့သြပါတယ်.။
ပန်းချီမပြီးသေးလို့ နောက်မှလို့ ပြောလဲမရပါ။ အတင်းပင်...။
ခင်မရောက်လာပြီး ခဏစောင့်ဘို့ ပြောပေးမှ နည်းနည်းငြိမ်သွားတာ။
ကျနော် တစ်ယောက်ကျောင်းသူတွေ တအုံးအုံးနဲ့ ဆိုတော့ အခန်းစောင့်ဆရာမက စိတ်တိုနေပုံရသည်...။
ကျောင်းသူလေးတွေကလည်းဆူညံနေသည်.။ ကိုယ်ကလဲ ဆွဲနေသူတွေကို အားနာတယ်....ပန်းချီဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေးဆွဲမှ
ကျောင်းသူတွေကို ဆရာမပြောလဲမရ ထပ်ဝိုင်းနေတော့၊ ဆ၇ာမ ဒေါသဖြင့်ထွက်သွားပြီး စောစောကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုသွားခေါ်လာတော့တာဘဲ။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 5:45 PM6comments:
စစ်ဗိုလ်ပြောပြသောပုံစံအတိုင်းဆို...ဖောက်ခွဲဘို့ (ကချင်အဖွဲ့ များက ရထားကိုခဏခဏ မိုင်းခွဲသည်)အတွက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်လွှတ်ထားပြီး..အ၀တ်အစားက စစ်အကျီ်၊ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စစ်လွယ်အိတ်နှင့် ဆိုတော့....
“ အဲဒါ ကျနော် မဟုတ်ပါဘူး...ဗိုလ်ကြီးတို့ ကျနော့်ကို ဘယ်အချိန်မှာတွေ့ တာလဲ”
“ မင်းက ငါ့ ကို ပြန်မေးရဲတယ်...ကဲ ငါတို့ တွေ့ တာ ဇီးကုန်းဘူတာဝင်ကာနီးမှ...ဘာဖြစ်လို့ လဲ”
“ ကျနော်တက်လာတာ...ရွှေဘို အလွန် .....မြို့ က၊ အဲဒီကနေ ဇီးကုန်းကြားမှာ...အချိန်တွေ အများကြီးဘဲ....ဒီလောက်တောင်ချမ်းနေတာ
မိုင်းခွဲမယ်ဆို အစောကြီးခွဲပြီး ဆင်းနေခဲ့ မှာပေါ့....စဉ်းစားကြည့်ပါဦး...ကျနော်မဟုတ်ဘူး...နောက်ပြီး ကျနော်က ၀န်ကြီးမြေးနော်...
၀န်ကြီး သူရ ဦး............ဆိုတာ ကျနော့်အဘိုး”
“ သြော်...ငါလဲစဉ်းစားမိလို့ မင်းကို ကော်ဖီတောင် တိုက်တာပေါ့ကွ....နေပါဦး..မင်းက ၀န်ကြီးမြေးမို့ ငါ့ကို မကြောက်မလန့် ပြန်ပြော
“ မဟုတ်ပါဘူး...ကျနော်အမှားမလုပ်ရင်...ကျနော့်အဖေကိုတောင် ပြန်ပြောရဲတယ်”
စစ်ဗိုလ်က အားရပါးရပြုံးလျှက်( ဟိုတုန်းက စစ်ဗိုလ်နော်....)........
“မင်းက တစ်ကယ့်ကောင်လေးဘဲကွ...နေပါဦး၊ အိမ်ကဘာလို့ ထွက်ပြေးလာတာလဲ”
“ ဒီနေ့ စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ လေ...စာဖြေပြီးသွားလို့ ကျနော့်ရှေ့ က ကောင်မလေးရဲ့ကျစ်ဆံမြီးလေးကို လှလို့ မေးခွန်း
နောက်ကျောမှာ ဆွဲနေတာ...ဆရာမကတွေ့ သွားပြီး မာမီ့( အမေ)ကိုတိုင်လိုက်တာ...အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မာမီက ကျနော့်ပါးကို
ရိုက်တာ...သွေးတွေပါထွက်တယ်...အဲလောက် ရိုက်စရာမှ မလိုတာ”
“မင်းကို ချစ်လို့ စာတော်စေချင်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ”
“ စာမေးပွဲက ပြီးပြီလေ”
“အေးကွာ....ငါလဲ မပြောတတ်တော့ဘူး....ခု မင်းဘယ်ကိုသွားမှာလဲ“
“ငါလဲ မင်းကို ခေါ်သွားလို့ မရဘူးကွ...မင်းသွားချင်သွားလေ....အပေါင်းအသင်းမမှားစေနဲ့ ”
“ ကဲ...မင်းလဲ နားနေတော့ ...ဒီထဲမှာဘဲ နေနော်...ကြိုက်တဲ့ ခုံမှာ ထိုင်....လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်တော့ မလုပ်နဲ့ နော်...ဟေ့ ရဲဘော်တို့ ရပြီ..လက်နက်တွေ ပြန်သိမ်းထား...သူမဟုတ်ဘူး”
ခဏလေး ထိုင်ကာဘဲ ရှိသေး လက်မှတ်စစ် ၀င်လာပြီး.....
ထို့ နောက်စစ်ဗိုလ်နှင့်စကား ပြောဆိုနေပြီး ကျနော့်ဆီကိုရောက်လာပါတော့သည်...
“လူစီးတွဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီမှာ တစ်ယောက်...ကဲ၊ လက်မှတ်” ( သူစကားပြောတာတော်တော်ဝဲတယ်...ကချင်လူမျိုး ထင်ပါတယ်)
“ ကျနော် လက်မှတ် မ၀ယ်ခဲ့ ရပါဘူး.....ကျနော့်မှာ တစ်ဆယ်ဘဲပါတယ်...ယူပါ”..
“ လက်မှတ်မ၀ယ်ရင် မရဘူးလေ”
ကျနော်လဲ ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေတုန်း...စစ်ဗိုလ်ရောက်လာပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး....ကျနော်ကို ပိုက်ဆံမယူဘို့ သူပြောပါသည်..။
လက်မှတ်စစ်မှာလည်း ဘာမှ မပြောဘဲ...အကြာကြီး ကြည့် နေပြီးမှ....
“ နင် တော်တော်ချမ်းနေတယ်ထင်တယ်”
“ ဟုတ်ကဲ့ချမ်းတယ်”
“ ရော့...ဒါဆို ငါ့အနွေးထည်ယူဝတ်ထား...ပြန်ဆင်းရင်တော့ ပြန်ပေးခဲ့ နော်...ဒါပြန်မပါသွားရင် ငါ့ မိန်းမဆူမှာ...ဟားဟား”
“ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ပြန်ပေးပါ့မယ်...ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်”
လက်မှတ်စစ်ကျေးဇူးကြောင့်အခုမှ နွေးနွေးထွေးထွေး နေ၇တော့သည်။ လက်မှတ်စစ်ကြီးမှာတော်တော်ချစ်ခင်စရာကောင်းပြီး
၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်နှင့် ပါးနှစ်ဘက်မှာနီရဲနေသည်...။ နောက်ပြီး သွေးမတော်သားမစပ် ကြင်နာစွာဆက်ဆံသောကြောင့် တွေးပြီး ၀မ်းနည်းသလိုဖြစ်လာသည်..။
ဘယ်လိုဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိ..ဆူညံသောအသံများကြောင့် နိုးလာတော့ နဘားဘူတာကိုရောက်ပြီ။
အောက်ခဏဆင်းပြီး မေးကြည့်တော့... ကသာကိုရထားလမ်းမရှိ..နဘားမှ ကားဖြင့်သွား၇မည်ကို ခုမှ သိ၇တော့တာ...။
ရထားကတော့ မထွက်သေးပါ...အနွေးထည်ပြန်ပေးဘို့ လက်မှတ်စစ်ကို လိုက်ရှာသည် မတွေ့ ၊ ကိုယ်ထိုင်ခဲ့ သော တွဲပေါ်
ပြန်တက်ပြီး စစ်ဗိုလ်ကို နုတ်ဆက်...ပြီးတော့ လက်မှတ်စစ်ကို လိုက်ရှာ...။
ရထားရှေ့ ဆုံးတွဲမှ နောက်ဆုံးတွဲထိ အပြန်အလှန်ရှာရသည်...ဘယ်လိုမှ မတွေ့ တော့ ဘူတာရုံကိုဝင်မေးမျ အလုပ်များနေသောသူ့ ကို တွေ့ ရသည်။ အကျီ်ကို ချွတ်ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့...
“ ငါက မင်းယူသွားပြီ ထင်နေတာ...”
“ သိတယ်..စ တာပါကွာ...ကောင်းကောင်းသွား”
ပြီးတာနဲ့ဘူတာ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ လက်ဘက်ရည်နဲ့ ကောက်ညှင်းထုပ် ၀ယ်စား လိုက်တာ ၅ကျပ်ကျော်ကျော် ကုန်သွား
ခဲ့ ပြီ...လဘက်ရည်က မသောက်ဘဲ မနေနိုင်...။
ဆိုင်ကလူကို ကသာကို ဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတော့ ..
“ရထားဆိုက်ချိန်မှာ ကြိုတဲ့ ကားရှိတယ်...ခုလောက်ဆို ထွက်သွားလောက်ပြီ”
“ခြေချင်(လျှင်) လျှောက်ရင် ဘယ်လောက်ဝေးလဲ”
“အာ...မိုင်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်..လမ်းကြမ်းတယ်၊ သွားလို့ မရဘူး”
သူက မသွားရန်ပြောပေမယ့် မသွားလို့ တော့ မရပါ....။
နှင်းတွေ ဝေနေသော ဖုန်လမ်းလေးအတိုင်း လျှောက်လာခဲ့ ရာ...တော်တော်ဝေးဝေး ရောက်မှ..
ဟေ့ဟေ့ နှင့် ခေါ်သံကြားလို့ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ လှည့်ကြည့်တော့...ပြောပြလို့ မတတ်သော.တိုင်းရင်းသားအကျီ င်္နှင့် ရွယ်တူ ကောင်မလေး တစ်ယောက်။
ဆံပင်အညိုရောင်လေးနှင့် ပါးလေးတွေ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ရဲစိုနေတာဘဲ..။
“ နင်ဘယ်သွားမှာလဲ” (စကားသံ တော်တော်ဝဲသည်၊ မနည်းနားထောင်ယူရတယ်)
“ နင် မသွားနဲ့ ...လမ်းမကောင်းဘူး...ကျားတွေ ဆင်တွေရှိတယ်၊ နောက်ပြီး နင့်ကိုသူပုန်တွေ သတ်မယ်...ကျားကိုက်မယ်”
“ငါ ..မသွားလို့ မရဘူး....”
“ နောက်ရက်မှ ကားနဲ့ သွား...ငါတို့ အိမ်မှာနေလေ”
“ကားခလဲ ပေးစရာ မရှိဘူး”
“ ပိုက်ဆံ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောတာ”
“ အေး...ငါ့မှာလဲမရှိဘူး....နင်ငါတို့ နဲ့ နေပါလား”
လက်ထဲကို အတင်းထိုးပေးပြီး ပလိုင်းလေးလွယ်လျှက် ထွက်ပြေးသွားသည်...။
ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ သူ အဝေးကြီးရောက်တဲ့ အထိ ကြည့် နေမိပြီး...လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့ သည်...။
မြူနှင်းငွေ့ များကြားမှ မြင်မြင်သမျှ ရှုခင်းတိုင်း လှနေသည်..။တောင်တန်းတွေ၊ သစ်ပင်ညို့ ညို့ မြင့်မြင့်ကြီးတွေ၊လှချင်တိုင်းကို
ဒါမျိုးမြင်ကွင်းတွေ၊ရှုခင်းတွေ တစ်ခါမှ မမြင်မတွေ့ ဘူးပါ...။
စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သီချင်းတွေ ဘာတွေ အော်ဆိုပစ်သည်....လူဆို တဦးတစ်ယောက်မှ မတွေ့ တော့...ပြေးလိုက် ကစားလိုက်...တောင်ကြီးတွေကို စကားတွေ အော်ပြောလိုက်...နှင့် ထူးထူးခြားခြား ပျော်နေမိတာ..။
တံတားတွေ တွေ့ လို့တံတားပေါ်ကငုံ့ ကြည့်လျှင် တော်တော်နက်သော ချောက်ကြီး ၊ လျှိုကြီးတွေကိုတွေ့ တော့....
ကျောက်ခဲလေးတွေကို ပစ်ချရင်း ကစားနေမိသည်...။
နောက်မှ သတိရပြီး အိတ်ထဲက ကျောင်းစာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်ခြင်းပစ်ချတဲ့ အခါ ဝေ့၀ိုက်ပြီး ဆင်းသွားသည်မှာ တော်တော်ကြည့်ကောင်းသည်....။
ခရီးအတော်ပေါက်လာပေမယ့် ခုထိနေရောင်မတွေ့ ၇သေး...။
ဆင်တွေထွက်လာမလား.....ကျားများထွက်လာပြီး...ဆွဲမလားတွေးမိတော့ နဲနဲကြောက်ပေမယ့် ...
ပါးနီနီကောင်မလေးကို သတိရရင်း ကောက်ညှင်းထုပ်စားဘို့ သတိရသည်....။
“ ငါ့ညီမလေးသာ ငါ့ကိုဒီလောက်ချစ်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာ”လို့ တွေးပြီး...မျက်ရည်က ကျမိသေးတယ်..။
(တော်တော် ပင်ပန်းနေလို့ ပါ)
Posted by သစ်နက်ဆူး at 8:42 AM7comments:
တခါတလေမှ မဟုတ်ပါဘူး......လဘက်ရည်၊ ကော်ဖီ သောက်တိုင်း နင့်ကို လွမ်းတာ...။
ငါက ကော်ဖီကြိုက်တယ်...နေ့ တိုင်းသောက်တယ်၊ ငါ့ ဘ၀ထဲကနေ ကော်ဖီ ဆိုတာ ပျောက်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ဖြူစင်မှုတွေနဲ့ခင်မင်
ခဲ့ ရတဲ့နင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး.....။
ငါ ဘယ်ရောက်နေတာ နင် မသိနိုင်သလို ....
နင် ဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုတာ....ငါမသိပါဘူး.....၊ တွေ့ ချင်သေးတယ်ဟာ....
ငါ ...နင့်ကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်တယ်...။
ခြုံပင် သစ်ပင်တွေ ၊အမှောင်ရိပ်တွေ ကြားမှ ရထားကိုသာ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်နေမိသည်...
မန္တလေး.မြစ်ကြီးနား အဆန်ရထား.....ထွက်တော့မည်....ဒီရထားနှင့်လိုက်သွားဘို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် မီးရောင်အောက်ကို မထွက်ရဲပါ...။ မတော်တစ်ဆ အိမ်ကလူတွေ လိုက်ရှာရင်းတွေ့ သွားလျှင် မလွယ်ပါ...ပြသနာက ပိုကြီးနိုင်သည်..။
ဒါကိုတွေးမိလို့ လဲ အလင်းရောင်ထဲ မထွက်ဘဲ၊ အမှောင်က စောင့်နေခြင်းပင်....။
ရထားလက်မှတ်မပါဘဲ ရထားခိုးစီးမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် ရထားတွဲထဲကိုတော့ မ၀င်ရဲပါ..။
ညမှောင်မှောင်မှာ တွေးပြီး ကြောက်မိသော်လည်း....မတတ်နိုင်ပါ...။ ရထားအရှိန်မပြင်းခင်လေးမှာပင် ခုန်တွယ်လျှက် ရထားတံခါး
၀မှာ တွယ်လိုက်သွားလိုက်သည်....။တခါမှ ရထားခိုးမစီးဘူးလို့နဲနဲကြောက်မိသော်လည်း စိတ်ကိုတင်းထားလိုက်သည်....။
တံခါးပေါက်ဘေးက လက်ကိုင်ကိုကိုင်ပြီး လိုက်သွားရင်း ဆောင်းတွင်းအအေးက ပိုဆိုးလာသည်။
ရထားအရှိန်နှင့် လေတိုက်ခတ်မှု နှင်းတို့ ၏ ရိုက်ခတ်မှုောကာင့် ခိုက်ခိုက်တုန်နေပြီ...။လက်တွေက ကျင်လာသောကြောင့်
တံတောင်ဆစ်နှင့် ကွေးပြီးချိတ်ထားရင်း အထဲကိုနောက်ပြန်ကြည့် မိသော်လည်း၊ တံခါးကို အထဲမှ ပိတ်ထားသည့်အတွက် ၀င်ဘို့ လဲ
မလွယ်ပါ...အထူးတွဲ ဖြစ်ဘို့ များသည်.။
ဦးခေါင်းထက်မှ တစ်ဆင့်စီးလာသော နှင်းရေတို့ သည် မျက်နှာပေါ်စီးကျလာသော်လည်း နွေးနေသလို...။ မျက်ရည်နှင့်နှင်းတို့ သည်
တစ်ထပ်တည်းဝတ်ထားသော စစ်အကျီင်္ င်္ ပါးပါးလေးနှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီက ဆောင်းဒါဏ် နှင်းဒါဏ်ကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးအေးစက်ပြီး ခိုက်ခိုက်တုန်နေပါပြီ...။
ဘူတာတွေ တစ်ခုပြီးတခု ကျော်ဖြတ်လာပြိးနောက် ဇီးကုန်းဘူတာဝင်တော့မည်။ ဇီးကုန်းဘူတာ ရောက်လို့ရထားခဏရပ်လျှင်
ရရာတွဲထဲသို့ဝင်မှ ဖြစ်တော့မည်....။ ဘူတာဆိုက်လျှင် ပြောင်းမည်လို့ စိတ်ကူးနေဆဲမှာပင်..နောက်ကျောသို့ထော်လာသော အသိကြောင့် လှည့်ကြည့်သော်လည်း အထဲကိုဘာမှ မမြင်ရပါ.။ သံဇကာကြားမှ ကျောကို ထောက်ထားတာ ဘာတွေမှန်းမသိသော်လည်း
တစ်ခုထဲမဟုတ် ၃...၄ခုဆိုတာတော့ စိတ်ကသိသည်.....ဘာဆိုတာဘဲ တွေးမရတာ...။
နောက်ဘူတာကို ၀င်လို့ ရထားအရှိန်လျှော့သွားမှ “ လုံးဝ မလှုပ်နဲ့ ” ဆိုသော စကားသံ မာမာ ကို ကြားရသည်။
ထို့ နောက် မှ တွဲရှေ့ ပေါက်မှ စစ်သားတွေ သေနတ်ကိုယ်စီဖြင့် ၁၀ယောက်လောက်ဆင်းလာပြီး ၀ိုင်းထားသည်။
မီးရောင်မှိန်မှိန်ဘူတာလေးမှာ လူတွေက မရဲတရဲ ၀ိုင်းကြည့် နေစဉ်မှာပင် အတင်းဖမ်းချူပ်ပြီး ရထားတွဲအတွင်းထဲကို အတင်းဖမ်းချုပ် ခေါ်သွားကြသည်။
တွဲအတွင်းထဲ ရောက်သောအခါ သီးခြားထိုင်နေသော စစ်ဗိုလ် တဦးကို တွေ့ ရသည်..၊ သေနတ်တွေကတော့ ၀ိုင်းချိန်ထားဆဲပင်။
နောက်မှ စစ်ဗိုလ်က သူ့ ရှေ့ တည့်တည့်ခုံတွင်ထိုင်ခိုင်းပြီး......။
“ ဘယ်ဘူတာက တက်တာလဲ”
ကိုယ်ကလည်း ပါလာသော စစ်လွယ်အိတ်လေးထဲက ကျောင်းစာအုပ်တွေကို ထုတ်ပြလိုက်သည်...။
စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာလုပ်ဘို့ ခေါ်မှန်းလဲ မသိသောကြောင့် ကြောက်စိတ်တော့ မဖြစ်မိပါ...။
“ အိမ်က ထွက်ပြေးလာတာ” လို့တစ်ခွန်းပြန်ပြောလိုက်သော်လဲ ယုံကြည်ပုံ မ၇သေးပါ..။
အမျိုးမျိုးလှည့် မေးနေသေးသည်။ ကျောင်းစာအုပ်ကို စစ်ဗိုလ်က ကြည့်လျှက် စာမေးသည်...။ ကိုယ်က ဖြေရသည်။
စာတွေ ရေးခိုင်းပြီး ကျောင်းစာအုပ်ထဲက လက်ရေးနှင့် တိုက်ကြည့်သည်...။
နောက်သူက “ မင်းချမ်းနေတယ် မဟုတ်လား” ဟုမေးသည်...။
ကိုယ်ကလဲ“ ချမ်းတယ်”ဟု ပြန်ဖြေသောအခါ စစ်သားတစ်ယောက်ကို ကော်ဖီ တစ်ခွက်ယူလာခိုင်းပြီး ကျနော့်ကို သောက်ခိုင်းသည်...။
“ မိဘတွေ ဘာအလုပ် လုပ်လဲ”
“ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ”
“ ကျနော်ဘယ်သိမလဲ” လို့ ပြန်ဖြေတော့ သူကရယ်နေပြီး..............
“ မင်းက ငယ်သေးတာဘဲ.....ကျောင်းသားအစစ်လို့ ငါယုံပါတယ်” လို့သူကပြောတော့...
ကျနော့်ကိုဘာလို့ အဲဒါတွေ မေးနေတာလဲဆိုမှ....
“ ငါတို့ ကို မိုင်းခွဲမယ်လို့ သတင်းရထားတာ...မင်းပုံစံနဲ့ကွက်တိဘဲ...”
Posted by သစ်နက်ဆူး at 10:29 AM7comments:
Posted by သစ်နက်ဆူး at 1:31 AM 8 comments:
မနေ့ က ညီမရှင်မင်းညို ဘလော့ဂ်မှာ ပန်းပုဏ္ဏရိတ် ဆိုတဲ့ ပို့ စ်လေးကို ဖတ်ရင်း ကျနော်သုံးခဲ့ ရတဲ့ပန်းကလေးကို အမှတ်တမဲ့သတိရသွားတာပါ....။ လက်ဝှေ့ ထိုးတာတို့ မျက်နှာပွင့်တို့ မှာ.ဆရာက အဆောင်တွေ ဘာတွေ ပေးရင် တစ်ပွဲတိုး
လက်ဖွဲ့ လေးတွေ၊ ပန်းလေးတွေ၊ ဆေးလိပ်တွေ ပေးတာတော့ အရင်က ကြားဘူးပါတယ်...။
ကျနော့်ရဲ့ တစ်ပွဲတိုးပန်းက ဘယ်ဆရာကမှ စီရင်ပေးတာလဲ မဟုတ်သလို ....ဘာအဆောင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ...။
ကျနော့်ဘ၀မှာလည်း ရံခါဖန်ခါ ကပ်သီးကပ်သတ် ကြုံရတာလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်...။
အဲဒါတွေ ထဲက တစ်ခုပေါ့ဗျာ...။ဖြစ်ပုံက ဒီလို....။
ကျနော်တို့ ဇာတ်ပွဲ ကမယ့်ရက် ၃/၄ရက်လောက် အားနေတော့ ဘာရယ်မဟုတ် နီးနေတာနဲ့သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ တပ်ကုန်းမြို့ ကို
အလည်သွားရော...။အလည်သွားတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အက ၀တ်စုံကတော့ ပါသွားတာပေါ့...။
ဟိုရောက်တော့လည်း အေးအေးမနေရပါဘူး....သူ့အမ ၀မ်းကွဲရဲ့ အငြိမ့် ဇာတ်လေးမှာ ဧည့်သည်အဖြစ် နှစ်ပါးခွင် တစ်ည
လောက်ကပေးဘို့ ပြောလာတော့ ၀င်ကပေးမယ်လို့ ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်....။ သူငယ်ချင်းကို ခင်လွန်းလို့ က ” ပေးမယ်ဆိုပေမယ့်
ကျနော်တို့ ဇာတ်ကြီးမင်းသားတွေက ဒီလို အငြိမ့် ဇာတ်လေးတွေမှာ မက ကြပါဘူး.....။။ အနု ပညာလိုင်းချင်းတူပေမယ့်.....
ရုံပွဲ မင်းသားတွေက နာမည်ထိမ်းရပါတယ်...။ မက လိုကြပါဘူး။။။
ကျနော်ကတော့ မရှိအတူ ၊ နေစားခဲ့ တဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ ကဘို့ လက်ခံလိုက်တာပါ...။
တပ်ကုန်းမြို့ ပေါ်ပွဲ မဟုတ်ဘူး....တပ်ကုန်းမြို့ နယ်ထဲမှာဘဲ....ရွာနာမည်မမှတ်မိတော့ပါဘူး...က”ရမှာကတော့ ဘုန်းကြီးပျံပွဲပါ..။
များလိုက်တဲ့ လူတွေဗျာ....။ ကြက်ပျံမကျပါဘဲ...( စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်..ကျနော့်သူငယ်ချင်းလူရွှင်တော် တစ်ယောက်ရှိတယ်...
ကျနော်တို့ မှာ အပြောချိုရတယ် ...ကနေတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ပွဲတော်ကြီးကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနိုင်ပါစေ...ဘာညာ
ပေါ့...နောက်ဆုံးညတိုင်းပြောရတာပါ...အဲဒီသူငယ်ချင်း ပေါ့ ၊ နောက်ဆုံးညမှာ “ အခုလို ကပြခွင့်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ၀မ်းသာမိပါတယ်...နောက်နှစ်တွေမှာလည်း အခုလိုဘဲ အောင်မြင်စွာ နဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပနိုင်ပါစေ”လို့ ဆုတောင်းလိုက်တာ စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး...အောက်ကနေ သူ့ ကို ခဲတွေ၊ ပြောင်းဖူးရိုးတွေနဲ့ ဝိုင်းပေါက်ရော...ကျနော့်မှာ ကြားဖြတ်ဝင်ပြီး တောင်းပန်လိုက်ရတာဗျာ....ကိုယ့်လူကမှ မနပ်တာ....ပွဲဒကာတွေ စိတ်ဆိုးမှာပေါ့....ကျင်းပနေတာက ဘုန်းကြီးပျံပွဲလေ)...သူဆုတောင်းပုံဆို ရင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတွေ...တစ်နှစ်တစ်ပါး....မျက်ခုံးလှုပ်စရာကြီးကိုး)။
ဆက်ရဦးမယ်....ဒါနဲ့ ကရောဆိုပါဆို့ ...ပရိတ်သတ်ကလည်းတော်တော်ကို အားပေးပါတယ်....။
အနုပညာ သမားတွေများ( သဘင်သည်+ အဆို) ပိုက်ဆံ မရရင်နေ ၊လူများပြီ ပရိတ်သတ် များပြီ ဆိုရင်တော့ မောရမှန်းတောင် မသိပါဘူး။။။
သူငယ်ချင်း အမတို့ ပွဲပြီးရင် နောက်ည ဆက်တိုက်ဝင်ကမယ့် ဇာတ်ပွဲကလည်း ကျနော်ကတဲ့ ည မှာ တစ်ညကြိုရောက်နေပါတယ်...။
မြင်းခြံဘက်ကလူတွေဆို သိပါတယ်...သူတို့ လဲ မြင်းခြံနယ်မှာ ဆိုရင်တော့ နာမည်ကြီးတွေပါ...။
ဒါနဲ့နှစ်ပါးသွားပြီးတော့ သူတို့ ညီအကို ရောက်လာပါတယ်...အကူအညီလာတောင်းတာပါ. သူတို့ ညီ အငယ်ဆုံးလေး ( ညီညီအောင်...လို့ ထင်ပါတယ်..သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး) တော်တော်ဖျားနေလို့နှစ်ပါး ခွင် ၀င်ကပေးဘို့အကူအညီတောင်းတာပါ...။
သူတို့ က တာဝန်ခွဲပြီး ကကြတာပါ..တစ်ယောက်က ပြဇာတ်၊ တစ်ယောက်က အော်ပဒါနဲ့ နောက်ပို င်း၊ သူတို့ က လူကြီးတန်း တွေ ဖြစ်နေတော့ သူတို့ ညီ အငယ်ဆုံးကို နှစ်ပါးကဘို့ တာဝန်ခွဲပေးထားတာပါ..။ အခုသူကဖျားနေတာဆိုတော့ အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကလည်း နှစ်ပါးမင်းသားဆို ငယ်မှ ကြိုက်တာကိုး...။
နောက်ဆုံး သူငယ်ချင်းကလဲ ၀င်တိုက်တွန်းတော့ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ကူညီမယ်လို့ ကတိ ပေးလိုက်ပါတယ်....။
အဲဒီအထိ ဘာမှ ပြသနာ မရှိပါဘူး၊
နောက်နေ့ လည်ကျတော့ မင်းသားခေါင်းပေါင်းကိုလျှော်လိုက်ပါတယ်...ညက ချွေးတွေ သိပ်ထွက်တားတော့ မိတ်ကပ်ချွေးက ခေါင်းပေါင်း အောက်နားလေးတွေမှာ ပေနေရင် ကြည့်မကောင်းဘူးလေ၊ ခေါင်းပေါင်းပန်းတွေကို သပ်သပ်ဖြုတ်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက်တံလေးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လျှော်ရတာပါ။ ပြီးတော့ ဇာတ်ခုံ ဘေးနားဘက်က ၀ါးတန်းလေးမှာလှမ်းပြီး စိတ်ချလက်ချ တစ်ချိုးတည်း အိပ်ပစ်လိုက်တာ ညနေ၄း၀၀ လောက်မှ နိုးပါတယ်...။ စားသောက်ပြီးလို့ခေါင်းပေါင်းကို ပြန်ယူတဲ့ အခွ ပြသနာ စ တာပါဘဲ....။
ခေါင်းပေါင်းထိပ်လေးမှာ တန်းရက်လေး ထိုးရတဲ့ နဖူးစည်း ဖော့ပန်းလေးတွေ မရှိတော့ဘူး....နဖူးစည်းပန်းဆိုတာ ခရေပွင့်ပံးစံ ဖော့ပန်းလေးတွေ...အနည်းဆုံး ၁၅ပွင့်လောက်ကို နိုင်လွန်ချည်နဲ့အတန်းလိုက်လေးသွယ်ထားတာ...။
အဲဒါလေး မပါရင် မင်းသားခေါင်းပေါင်း အင်္ဂါရပ် မပြည့်စုံတော့ဘူး...။ခက်ပြီ.....။
ဦးဝင်းကြိုင်တို့ အထဲက လူတွေကိုမေးလဲ မတွေ့ မိဘူးဘဲ၊ ပြောတာပေါ့..။ ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ် ၊ လေတိုက်ပြီးလွင့်သွားရင် ဘယ်လိုသိမှာလဲ...။ ဇာတ်ထဲက ယိမ်းမင်းသားအငယ်လေးတွေဆီမှာ အပို ရှိလားမေးတော့ မရှိကြပါဘူး...အမှန်ဆို အဲဒီပန်းလေးတွေက ဘယ်မင်းသားမှ အပိုမဆောင်ကြပါဘူး....ခေါင်းပေါင်းတစ်လုံးမှာ တစ်ခုဘဲ...၀ယ်ကတည်းက အပြီးတပ်ပြီးသား၊။
ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး...ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဖြစ်ဖြစ်၊စိန်ဂျွမ်းဈေးဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်လို့ ရပါတယ်....ဈေးလည်းမကြီးပါဘူး...။
အခုဟာကနယ်ပွဲ၊ ကပြရမှာကလဲ သူများဇာတ်မှာ ၊ အဖွဲ့ ထဲက လူတွေကလည်း ရန်ကုန်ဇာတ်ကြီးမင်းသားနှစ်ပါးခွင် ၀င်ကပေးမှာဆိုလို့ကိုယ့်ဘဲ အကဲခတ်နေကြတာ...။ ဒီမှာကလဲ..ပြသနာ.။ ဇာတ်ကြီးမင်းသား ခေါင်းပေါင်းက အင်္ဂါ မစုံလို့ တော့ အပြောမခံချင်ဘူး....ပြောခံရမှာလဲ ကြောက်တယ်။
ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ ၆နာရီလောက်ရှိနေပြီ...စိတ်လဲညစ်နေပြီ...နောက်မှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က အကြံပေးတယ်...ဘုန်းကြီးပျံပွဲဆိုတော့ ဈေးတန်းကြီးရှိတယ်...အကို ပွဲဈေးတန်းမှာ လိုက်ရှာဝယ်ပါ့လား...လို သတိပေးမှ....ဟာ..ဟုတ်တာဘဲ...တစ်ချို့ ရောင်းတတ်ကြတယ် ဆိုပြီး ပွဲဈေးခင်းမှာ ပါတ်ရှာတာ...တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက်...။
ပန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ အများကြီးပါ၊ စက္ကူပန်း၊ ပလပ်စတစ်ပန်း၊ အ၀တ်ပန်း၊ ကြက်မွှေးပန်း အကုန်ရှိတယ်ဗျာ....
ကံမကောင်းချင်တော့ ကျနော်လိုတဲ့ ပန်း တစ်ဆိုင်မှ မရှိဘူး...။ ကိုယ်များ မျက်စိရှန်းနေတာလားဆိုပြီး...တစ်ခေါက်...နှစ်ခေါက်....
အခေါက်ပေါင်းများလို့ ခြေတွေသာ ညောင်းတယ်...လုံးဝမတွေ့ ပါဘူး...။
လူလည်း တော်တော် စိတ်ညစ်နေပြီ...ချွေးတွေ၊သံတွေနဲ့ဖုန်အလူးလူးနဲ့ ...ကိုယ့်ဟာကိုလဲ ဒေါသဖြစ်....။
နောက်ဆုံး စိတ်လျှော့လိုက်ရတယ်ဗျာ...။ ဟိုမှာပွဲတောင် စထွက်နေပြီ....ကိုယ့်မှာ မိတ်ကပ်ပြင်ဘို့ နေနေသာသာ...ရေတောင်မချိုးရသေးဘူး..။
နောက်ဆုံး မရတော့မယ့် အတူတူ ခဏ နားမယ်ဆိုပြီး တွေ့ တဲ့ မဏ္ဏပ်မှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တာပေါ့....ပွဲခင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆောက်ထားတာပါ....ပွဲခင်းနဲ့ တော့ တော်တော်ဝေးတယ်...။ ဘုန်းကြီးပျံ မဏ္ဏပ်ပါ....တစ်ချို့ ဒကာတွေလဲ ၀ိုင်းဖွဲ့ ထိုင်လို့ ...အလွမ်းတွေ သယ်ကြ၊ ဆရာတော် အကြောင်း ပြောကြ နဲ့ ပါ...။အဘိုးကြီးတွေ အဘွားကြီးတွေပါ...။ရေနွေးကြမ်း ၀ိုင်းဖွဲ့ လို့ ပေါ့...။
ကျနော့်ကိုတောင် ရေနွေးသောက်ဘို့ခေါ်ပါတယ်။။။ဒီအချိန်မှာတော့ သိကြားမင်းလာတိုက်တဲ့ ရွှေရင်အေးတောင် မျိုကျမှာ သောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး....။
ဒါနဲ့ လက်မှိုင်ချပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လုပ်နေရင်းနဲ့ ထခုန်မတတ် ၀မ်းသာသွားတယ်ဗျာ....။
ဈေးမကြီးပေမယ့် ၀ယ်လို့ မရတဲ့ ပန်း....
ဗိုလ်ချုပ်ဈေး၊ စိန်ဂျွမ်းဈေး ပန်းအရောင်းဆိုင်လားထင်ရပါရဲ့ ..။
အထွေးလိုက် အပွေ့ လိုက်....တွဲလောင်းချလို့ တစ်မျိုး.....ကွေ့ကာဝိုက်ကာ တစ်မျိုး ။ ပန်းမျိုးစုံတွေကြားမှာမှ...ကိုယ့်ပန်းလေးက ပိုထင်ပေါ်ပြီးလှနေသလိုဘဲ....။နည်းတဲ့ ပန်းတွေလားဗျာ....
ဘုန်းကြီးရုပ်ကလာပ် မှန်အခေါင်းမှာ ဆင်ထားလိုက်ကြတာ..။ ကိုယ့်မှာ ၀မ်းသာရအခက် ၀မ်းနည်းရအခက်...။
ပန်းကိုတက်မက်စိတ်နဲ့ အနီးကပ်ကြည့်လေ၊ မှန်ခေါင်းထဲက ဘုန်းကြီး ရုပ်ကလာပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလေ...။
ကြောက်လိုက်တာ ဆိုတော့..။ ထွန်းထားတဲ့ မီးကလဲ မှိန်မှိန်လေး။
ပန်းကိုတွေ့ ပေမယ့် ရောင်းတာလည်းမဟုတ်၊ တောင်းမယ်ဆိုလဲ ဘယ်သူမှ ပေးမှာ မဟုတ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး...။
နောက်မှ လူရှင်းသွားပြီ...အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေလဲ ပွဲခင်းကိုသွားပြီဆိုမှ..။
“အရှင်ဘုရား....ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား၊တပည့်တော်မှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေလို့ ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ပန်းနဲနဲလောက် စွန့် ပါဘုရား”
လို့ ခွင့်တောင်းပြီး....ရုပ်ကလာပ်ဘေးက ပန်းလေးကို မရဲတရဲ လက်နဲ့ ဆွဲဖြတ်ပေမယ့်...နိုင်လွန်ကြိုးက မပြတ်ပါဘူးဗျာ....။
ဒါနဲ့ “ အရှင်ဘုရား...တပည့်တော်..ပြန်လာပါ့မယ်ဘုရား....ဒီနေရာကို ဘယ်သူမှ ရောက်မလာအောင် ကူညီပေးပါဘုရား” လို့ ပြောပြီး...ပွဲဈေးတန်းကို ပြေးရတာပေါ့...။
ဘုန်းကြီးက ဘာပြန်ပြောမှာလဲ အသက်မှ မရှိတာ....ကိုယ်ကလဲ ဘုန်းကြီး အလောင်းကို ကြောက်တာရယ်....ပန်းယူတာ လူမိသွားမှာ၊ လူတွေ့ မှာ ကြောက်တာရယ်ပေါင်းပြီး....ပါးစပ်ကပြောနေရတာကိုး...။
ပွဲဈေးတန်းမှာ ဘရိတ်ဓါး လိုက်ရှာဝယ်ရတယ်...လိုချင်ပြီဆို...ရှာလို့ တောင်မရဘူးဗျာ...။
ဘရိတ်ဓါးကိုသဲကြီးမဲကြီး လိုက်ဝယ်နေတော့ တစ်ချို့ ဆိုင်တွေက ၊တယ်ပြီး မသင်္ကာသလိုကြည့်ကြသေးတယ်....နောက်မှ
ကုလားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမေးတော့ သူကတောင်ပြန်မေးသေးတယ်...။ကြည့် ပါဦးဗျာ မေးပုံက....
“ ခင်ဗျား...ခါးပိုက်နှိုက်လား” တဲ့ ...။ ဒေါသဖြစ်လိုက်တာဗျာ....ဒါပေမယ့် စိတ်မဆိုးအားပါဘူး...။
ကျနော့် အခက်အခဲကို ပြောပြမှ...ဒါဆို သူမုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ ဓါးအဟောင်းတော့ရှိတယ်..ယူမလားမေးတော့ ကျနော့်မှာ ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး.....။
ဓါးရတာနဲ့ ချစ်သောဘုန်းဘုန်းဆီကို တစ်ခါ ပြန်ပြေးရတာပေါ့...။
ဟိုရောက်တော့ ထပ်ကန်တော့ ...ပန်းစွန့် ဘို့ ထပ်ပြော...ကိုယ့်မှာလဲ ရဲရဲ မကပ်ရဲဘူး....။
နောက်ကံဆိုးချင်တော့ အဘိုးကြီး ၂ယောက် ရောက်လာပြီး ဟိုဘက်နားမှာ လာထိုင်နေကြရော...။
အဖော်ရှိတာ ၀မ်းသာပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်စွန့် မလဲ....။
နောက်ဆုံးတော့ ဘေးကကြည့်ရင် ဘုန်းကြီးရဲ့ ငယ်တပည့် လေးမို့အလွမ်းမပြေနိုင်ဖြစ်ပြီး လာငိုသယောင်...ကန်တော့ သယောင်လုပ်ပြီး... ဘုန်းကြီး အခေါင်းဘေးမှာ ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်ချလိုက်ရတာပေါ့...နောက်မှ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ပန်းကလေးကို ဓါးနဲ့ အသာလေး ဖြတ်ရပါတော့တယ်...ပါးစပ်ကလည်းတောင်းပန်လိုက်ရတာ....။
နောက်ဆုံးတော့ ပန်းလေးရသွားပါတယ်..။ ရပြီးတော့ ထပ်ကန်တော့ ပြီးတာနဲ့ဟန်မပျက် မဏ္ဏပ်ထဲက ထွက်လာပြီး...
ဇာတ်ရုံကို အသားကုန်ပြေးတာ...။ (ငယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးသရဲက ပိုဆိုးတယ်လို့ ကြားဘူးထားတာကိုး)၊
ဟိုမှာကလည်း မင်းသားပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတာ....။
နောက်ဇာတ်ရုံနောက်မှာဘဲ ရေချိုး...ခေါင်းပေါင်းပြန်ဆင်...ပြီးတော့ မိပ်ကပ်လိမ်း.....။
ကွက်တိလောက်ပါဘဲ...။ ဟိုမှာလဲ ပြဇာတ်ပြီးတော့မှာလေ...။
ဒါနဲ့နှစ်ပါးခွင်ကို ကဖြစ်ခဲ့ တာ....။
ရလိုက်တဲ့ ဆုတွေဗျာ.... တစ်ခြားဇာတ်မင်းသားတွေ၊ ဇာတ်ဆရာတွေတောင် အံ့သြတယ်....။
ဒါကြောင့် ဒီပို့ စ်လေးကို နာမည်ပေးထားတာ...
Posted by သစ်နက်ဆူး at 4:35 AM7comments: